Ingqikimba emsebenzini kaLorca | Izincwadi Zamanje
Njenganoma imuphi omunye umbhali ofanele usawoti wakhe, ku UGarcia Lorca, ukukhathazeka kwakho futhi izinkathazo zabonakala emisebenzini yakhe ngokuphindaphinda okuthile. Esihlokweni esilandelayo sizodalula ezinye zazo:
Ezothando nezocansi Bekuyizinjini ezimbili zomsebenzi kaLorca. Eyokuqala yazo uhlobo lokuqinisekiswa noma ukulungiswa kwesibili esivame ukufihlwa ngaphansi kwezimpawu eziyinkimbinkimbi ezivame ukusivumela ukuthi sikubone ukukhungatheka komlobi ngokwengcindezelo yendawo ezungeze ubungqingili.
La ukufa Kwakungenye yezinkanuko zikaFederico, nokho owabona kuye imfihlakalo eyayikhanga. Ukufa kuvame ukuhlobene nokucindezelwa kothando noma imizwa evusa inkanuko, njengoba kwenzeka ku-Adela, umlingiswa osemncane we "The House of Bernarda Alba" ogcina ngokuzibulala ngemuva kokubona ubudlelwane bakhe nonina bukhungathekiswe ngamandla akhe UPepe El Romano.
I-Las Ukungabi nabulungisa emphakathini. Kulokhu akubhekisi ezinkethweni zocansi kuphela noma kwinkululeko yothando kepha futhi nakwezombusazwe noma kwemibono. Umbono kaLorca maqondana nalokhu ungokoqobo futhi awunathemba ngoba uyabona ukuthi abangenakuzivikela balahlekelwa kanjani njalo, ikakhulukazi lapho imibono noma imizwa yabo ishayisana naleyo yamandla.
Imininingwane engaphezulu - Umlando kaGarcia Lorca
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Literatura » Abalobi » Izingqikithi eziphindaphindayo eGarcía Lorca